eNasha.com - सन्देश दिँदै सकियो पिङ्क पेजेन्ट २००७
१८ जना प्रतियोगीहरु आफूलाई कोभन्दा को कमको रुपमा प्रस्तुत गर्दै तिनले लैङ्गीक असमानताको विरोध गरे । प्रसङ्ग नेपालमा दोस्रो पटक आयोजना गरिएको द पिङ्क पेजेन्ट २००७ को हो । काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा, धरान र जनकपुरबाट आएका 'मेटी'हरुले आफूलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए ।
कार्यक्रममा चलचित्र उद्योगका हस्तीहरु तुलसी घिमिरे, नारायण पुरी, बसुन्धरा भुसाल, भुवन चन्द, सुभद्रा अधिकारीको उस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै भारती घिमिरे, नायिका मीरा केसी, चलचित्र निर्माता सञ्जीव प्रधान, कलाकार ध्रुव कोइराला आदि पनि देखिएका थिए ।
तेस्रो लिङ्गी पनि मान्छे नै हो, उसमाथि मान्छेजस्तै समान व्यवहार गरौँ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रमको शुरुवात भएको थियो । जसमा जनकपुरकी प्रतियोगी ताराले आफ्नो परिचय हिन्दीमा दिएकी थिइन् । काठमाडौँकी भूमिका श्रेष्ठले परिचय दिइसकेपछि 'ज्वजलपा' भनिन् ।
प्रतियोगिताको पहिलो चरणमा सबै १८ प्रतियोगीले आफूलाई 'पिङ्क गाउन'मा परिचय गराएका थिए । सबैभन्दा रोचकता त्यतिबेला थपियो, जब प्रतियोगी अञ्जलीले आफ्नो परिचयसँगै आफूलाई हौस्याउन आफ्ना परिवारका सदस्य र श्रीमानसमेत आएको बताइन् । त्यसपछि 'बाह्रहाते पटुकी...'मा नृत्य प्रस्तुति थियो ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सांस्कृतिक विविधता झल्काउने भेषभूषा र हाउभाउ प्रस्तुत गरिएको थियो । जनकपुरकी प्रतियोगी तारा र नेपालगञ्जकी सुहानाले थारु पहिरनमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रम शुरु हुनुअघि नै निर्णायक मिस युनिभर्सिटी उषा रजक, वकिल रविन सुवेदी उपस्थित भइसकेका भए पनि अर्का निर्णायक पपस्टार निमा रुम्बा पानी दर्किएका कारण कार्यक्रममा आउन ढिला गरेका थिए ।
१८ जना प्रतियोगीमध्ये गाउन राउण्ड र कल्चरल राउण्डमा दिएको प्रस्तुति र परिचयका आधारमा उत्कृष्ट १० छानिएका थिए । जसमध्ये पुष्पा लामा, दिया, काजोल क्षेत्री, भूमिका श्रेष्ठ, रिया गुरुङ, सिन्धुरा सापकोटा, सोफी गुरुङ, विपाशा र्राई, अञ्जली, विन्ध्या रहेका थिए ।
अञ्जलीको नाम उत्कृष्ट १० मा आएपछि दर्शकदीर्घाबाट प्रतिक्रिया आयो- "अञ्जली त पर्नै पथ्र्यो नि !" फोटो पत्रकार उषा तितिक्षुले ती दर्शकलाई सोधिन्- "किन नि -" "उसले अहिलेसम्म राम्रो बोलिरहेकी छे, आकर्ष पनि छे- त्यही भएर !" ती दर्शकको जवाफ थियो ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट नौको नाम मात्र बताएकी कार्यक्रम प्रस्तोता पूजालाई दर्शकदर्ीघाबाट हुटिङ आयो । त्यसपछि दशौँ विन्ध्याको नाम उच्चारणपछि दर्शकले चिच्याए- "एघारौँमा खोई त त्रि्रो नाम -" पूजाले मुस्कानमार्फ जवाफ दिइन् ।
उत्कृष्ट पाँचको छनोट चरण
उत्कृष्ट दशको छनोटपछि दश प्रतियोगीहरुलाई प्रश्न सोधिएको थियो । अञ्जलीलाई सोधियो- आफ्नो घरपरिवार र समाजबाट तपाइँको के अपेक्षा छ ?
अञ्जली- समान व्यवहार, स्वीकार्य र समान अवसरको व्यवहार होस् ।
सोफीलाई प्रश्न थियो- अहिलेको तपाइँको भित्री आवश्यकता के हो ?
सोफी- अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधानमा हाम्रो हक र अधिकारको सुनिश्चितता नै हाम्रो आवश्यकता हो ।
सिन्धुरालाई प्रश्न थियो- हाम्रो देशलाई समुन्नत बनाउन के गर्नु पर्ला ?
सिन्धुराले भनिन्- "शान्ति नै आवश्यक छ र शान्तिपछि विकासका तीन धार पर्यटन, शिक्षा र जलश्रोतलाई हामीले अगाडि बढाए हामी समुन्नत हुन सक्छौँ ।"
तपाइँजस्तै हिंसा र यातनाका शिकार भएकालाई तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
भूमिकाले भनिन्- "अन्याय नसहौँ, त्यसको प्रतिकार गरौँ । त्यसले तपाइँजस्ता अरुलाई पनि अन्याय नसहन प्रेरित गर्न सक्छ ।"
तपाइँ विजयी भएको खण्डमा समाजमा के गर्नुहुन्छ ?
दियाले भनिन्- "अल्पसंख्यक प्रति समाजले संकीर्ण सोचाई राख्छ । यस्ता संकीर्ण र नकरात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न विभिन्न कामहरु गर्नेछु ।
विगतमा तपाइँले सिक्नु भएको महत्वपूर्ण शिक्षा के थियो - त्यो शिक्षालाई अहिले कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ ?
पुष्पाले भनिन्- "मैले हिजो पहिचान गुमाएको थिएँ । म एक्लो छु भनेर चूप थिएँ । तर त्यसरी आफूलाई एक्लो छु भनेर चूप बस्नु हुन्न । आफूहरुजस्तै अरुलाई पनि खोजेर एक हुनुपर्छ र बलियो हुनुपर्छ ।
तपाइँलाई कुन अङ्ग महत्वपूर्ण लाग्छ ? किन ?
काजल क्षेत्रीले भनिन्- "मेरालागि प्रत्येक अङ्ग बराबर हुन् । तापनि आँखा महत्वपर्ूण्ा लाग्छ । यसले राम्रा र नराम्रा दुवै चिज देख्छ । तर हामीले राम्रा चिजलाई हेरेर प्रेरणा लिनर्ुपर्छ ।"
गुलाफको फूलसँगै काँडा किन भएको होला ?
रिया गुरुङले उत्तर दिइन्- "किनभने हरेक सुन्दर चिजसँगै त्यसलाई संरक्षण गर्न आवश्यक भएकाले । हामी पनि संसारका सुन्दर चिज हौँ, गुलाफको सुन्दरताबाट सिकेर हाम्रो पनि संरक्षण होस् ।"
विपाशाको गालामा डिम्पल थियो । पूजाले उनको डिम्पलको प्रशंसा गर्दै डिम्पलको नेपाली अर्थ सोधिन् । विपाशाले 'जून' भनेर उत्तर दिइन् । उनलाई पूजाले उनको भागको प्रश्न सोधिन्- "तपाइँलाई संसारमा सबैभन्दा बढी कसको माया लाग्छ ? र, किन ?"
विपाशाले उत्तर दिइन्- "संसारमा मलाई तीन जनाको साह्रै माया लाग्छ । पहिलो आमाको, जसले मलाई जन्म दिनुभयो, संसार देखाउनु भयो । दोस्रो स्वयम्को । र, तेस्रोमा राष्ट्रको ।"
त्यसपछि प्रतियोगिताको अन्तिम प्रश्न र प्रतियोगी विन्ध्यातिर प्रश्न गरिन् पूजाले- "तपाइँले अहिलेसम्म महत्वपूर्ण के कुरा गुमाउनु भएकोजस्तो लाग्छ ?"
विन्ध्याले भनिन्- "अहिलेसम्म म तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण समाजबाट अपहेलित भएँ र त्यही कारण मैले नागरिकतासमेत पाइनँ । परिचयहीन भएर बस्नु नै ठूलो गुमाइ हो ।"
यसरी यिनले दिएको उत्तरमा सन्तुष्ट भएका निर्णायक मण्डलहरु हिसाबकिताबमा व्यस्त भएपछि स्टेजमा कुमारीले चियाबारी...गीतमा मज्जाको नृत्य प्रस्तुत गरिन् । त्यसपछि निरुता र यानाले मारुनी नृत्य नाचे भने सानुले कौडा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यससँगै सारी राउण्ड शुरु भयो, जसमा आकर्ष सारीमा १८ जना प्रतियोगी मञ्चमा देखिएका थिए ।
सारी राउण्ड सकिएपछि निर्णायकहरुले तीन महत्वपूर्ण विधामा प्रतियोगीलाई पुरस्कृत गरे । जसमध्ये रविन सुवेदीले सिन्धुरालाई पिङ्क पर्सनालिटी २००७, निमा रुम्बाले अञ्जलीलाई पिङ्क चार्मिङ २००७ र उषा रजकले पिङ्क कञ्जिनियालिटी (मिलनसार) २००७ का रुपमा रिया गुरुङलाई पुरस्कृत गरेका थिए ।
यसलगत्तै उत्कृष्ट पाँच प्रतियोगीका रुपमा विन्ध्या गौतम, सोफी गुरुङ, भूमिका श्रेष्ठ, पुष्पा लामा र रिया गुरुङ छानिएका थिए । यी पाँच प्रतियोगीलाई निर्णायक प्रश्न सोधिएको थियो ।
निमाले विन्ध्यालाई सोधे- नागरिकता नपाएका तपाइँजस्ता अरु साथीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
विन्ध्या- "हामी पनि अरुजस्तै आमाको कोखबाटै जन्मिएका हौँ । सरकारलाई भन्न चाहन्छु, हामी पनि मान्छे हौँ । मानवीय व्यवहार होस् र साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु- पहिचान नलुकाऔँ । आफ्नो हक र अधिकारका लागि लडौँ ।"
रविनले सोफीलाई सोधे- नेपालमा गणतन्त्र या राजतन्त्रमध्ये के चाहनुहुन्छ ?
सोफी- "जनआन्दोलनको उद्देश्य नै गणतन्त्र थियो । मैले जनआन्दोलन भाग २ मा आफन्त गुमाएकी थिएँ । साथीहरु पनि गुमाएँ । त्यसैले जुन उद्देश्यका लागि लडिएको थियो, त्यो पूरा होस् भन्ने चाहन्छु ।"
उषाले भूमिकालाई सोधिन्- प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
भूमिका- "मजस्ता कैयौँ व्यक्ति अनागरिक भएर बाँचेका छन् । प्रधानमन्त्री भएँ भने हामीजस्ता पिछडिएका वर्ग, जाति, लिङ्गका व्यक्तिलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने थिएँ । रोजगारी बढाउने र विश्वमा देशको नाम चम्काउने थिएँ ।"
यता रविनले पुनः अर्को प्रश्न सोधे पुष्पालाई- शिक्षा र रोजगारमध्ये के आवश्यक छ ?
पुष्पाले भनिन्- "शिक्षा नै महत्वपूर्ण छ किनभने तेस्रो लिङ्गीहरु अशिक्षित भएकाले नै पछाडि परेका छन्, रोजगारी पाएका छैनन् । शिक्षाले जनचेतना फैलाउँछ भन्ने लाग्छ ।"
उषाले रियालाई अन्तिम प्रश्न गरिन्- संविधान सभामा यौन, लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई सहभागिता गराउन के गर्नुपर्छ ?
रियाले भनिन्- "सबै एक जूट भएर हक र अधिकारको लागि जनचेतना फैलाउनु पर्छ । तिनलाई त्यसमा भाग लिन प्रोत्साहन दिइनु पर्छ ।" रियाले पहिलो पटकमा राम्रोसँग जवाफ दिन सकिनन् । पूजाले सोधिन्- "तपाइँलाई यस प्रश्नको जवाफ आउँदैन कि उत्तर दिन धकाउनु भयो ?" रियाले छोटो उत्तर दिइन्- "धकाएर हो, उत्तर त आउँछ ।" त्यसपछि दर्शकदीर्घाबाट उनलाई हौस्याउन ताली बज्यो र उनले पटट जवाफ दिइन् ।
यसपछि निर्णायक मण्डललाई अङ्क तालिका जोड्न समय दिइयो । यसबीचमा निरुताले मै मोरीलाई ... गीतमा आकर्ष नृत्य प्रस्तुत गरिन् भने चन्द्रले केलाई चाहियो... (धर्मेन्द्र सेवान) को गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरे । यसपछि उत्कृष्ट तीनको घोषणा भयो । कुमारीले सेकेण्ड रनरअप विन्ध्यालार्य आफ्नो क्राउन फुकालेर उनलाई दिइन् । त्यसैगरी पुष्पा लामालाई मनीषा विष्टले आफ्नो क्राउन फुकालेर सेकेण्ड रनरअप भन्दा आँखाबाट आँशु खसालिन् । त्यसैगरी अन्तिममा पूर्व पिङ्क क्वीन अमिषा श्रेष्ठले भूमिका श्रेष्ठलाई पिङ्क क्वीन घोषणा गर्दै आफ्नो क्राउन लगाइदिइन् । अतिथि बसुन्धरा भुसालले उनलाई टाइटल लगाइदिएकी थिइन् र उनको गालामा चुम्बन पनि गरिन् ।
यसरी राजधानीबासीले वृहद्स्तरमा पहिलो पटक द पिङ्क क्वीन २००७ को मज्जा लिए । यसअघि पहिलो पटक राजधानीमा सन् २००३ मा पिङ्क क्वीन घोषित भए पनि चेतनाको अभावमा उति प्रचार भएको थिएन । यसमा विजेता भूमिकाले इन्टरनेशनल ट्रान्सजेण्डर ब्युटी कन्टेस्टमा भाग लिन पाउने छिन् ।
यता समलिङ्गीहरुबारे सर्वसाधारणमा भ्रम चिर्ने उद्देश्यले राजधानीमा आजदेखि तीन दिने चलचित्र महोत्सव शुरु भइरहेको छ ।
समलिङगी beauty queen shopping jwelery stylist shorts fashion at work summer lehenga belts labels people-speak shoes dress dating cheap jacket pageant women fashion at work
• Pink Queen 2007